क्रूस को सन्देश (१) - सृष्टिकर्ता परमेश्वर-The Message of the Cross (1) (Nepali) - Manmin Center Delhi
क्रूस को सन्देश (१) – सृष्टिकर्ता परमेश्वर-The Message of the Cross (1) (Nepali)
क्रूस को सन्देश (१) – सृष्टिकर्ता परमेश्वर
उत्पत्ति १ः १
आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
येशू ख्रीष्टको नाममा संसारभरका दर्शकहरू भेट्न पाउँदा ठूलो आनन्द लाग्यो।
सियोल कोरियामा मानमिन सेन्ट्रल चर्चको पादरी डा. जेराक ली हुँ।
सन्देशहरुको शीर्षक, जुन म आज देखि तपाई संग बाड्न चाहान्छु, क्रूसको सन्देश हो।
क्रूसको सन्देशले मानिसजातिको उद्धारको लागि परमेश्वरको प्रबन्धलाई स्पष्टसँग बताउँछ।
यो एउटा गहिरो रहस्य हो जुन समयको सुरू हुनुभन्दा अघि लुकेको थियो र यसले हामीलाई परमेश्वरको महान प्रेम र न्यायको महसुस गराउँदछ। परमेवर को हो
के कारण छ जुन परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी, यसमा भएका सबै थोक, मानिसजाति सृष्टि गर्नुभयो र उसलाई यस पृथ्वीमा बस्न दिनुहुन्छ?
परमेश्वरले किन असल र खराबको ज्ञानको रूख रोप्नुभयो? येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र उहाँ किन मानिसजातिको निम्ति मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ?
हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा हामी किन मुक्ति पाउँछौं? क्रूससको सन्देशसँग यी प्रश्नहरूको सबै जवाफहरू छन
मैले पहिलो पटक १ 1985उमेेंहम मा यो सन्देश प्रचार गरेकोले यसले कोरियामा मात्र होइन तर विश्वभरि धेरै मानिसहरूलाई मुक्तिको बाटोतर्फ डो .्यायो।
सन्देश अडियो र भिडियो टेपमा र पुस्तकहरू द्वारा प्रसारण गरिएको छ।
यस सन्देशको माध्यमबाट असंख्य मानिसहरूले परमेश्वरको चमत्कारपूर्ण कार्यको अनुभव गरे।
उसले आफ्नो पापको हृदयको तल्लो भागबाट पश्चात्ताप गर्योक र स्वर्गको राज्यको लागि साँचो विश्वास र सिद्ध आशा प्राप्त गर्न सक्षम भयो। उनीहरूले आफ्नो पापमाथि विजय हासिल गर्न र परमेश्वरको वचनहरू अनुरूप हिंड्न सक्षम भए।
जब मैले येशू ख्रीष्टको नाममा यो सन्देश मार्फत प्रार्थना गरी कि उसले पश्चाताप गर्न सकी, तब उसले परमेश्वरको शक्तिले अचम्मका कामहरू अनुभव गर्यो। उसको रोगहरु निको भयो र कमजोरीहरु निको भए। दुष्टात्मा र अन्धकारको शक्ति बाहिर निकालियो।
जसले मुक्तिको बाटोमा ध्यान दिएर सुने र मुक्तिको मार्गलाई महसुस गरे। तिनीहरूले येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको सामर्थको आश्चर्यकर्महरू अनुभव गरे।
म प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले आज क्रूसको सन्देश मार्फत आश्चर्यकर्महरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिय भाइबहिनीहरू, जब तपाईं चर्चमा जानुहुन्छ र ख्रीष्टमा बस्नुहुन्छ, तपाईं मसीहीधर्ममा मुक्तिको बाटोको बारेमा सुन्नुहुन्छ।
हामी यसलाई छोटकरीमा समीक्षा गरौं। झन्डै २,००० वर्ष अघि, परमेश्वरको पुत्र येशू मानिसजातिलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्न पृथ्वीमा आउनुभयो।
तपाईंहरू मध्ये धेरै जनालाई मात्र थाहा छ, येशू क्रूसमा टाँगिनुभयो, मानवजातिलाई तिनीहरूका पापहरूबाट छुटकारा दिन र उहाँलाई गाड्न। उहाँ तेस्रो दिनमा पनि जीवित हुनुहुन्थ्यो। यस तथ्यलाई विश्वास गर्नेहरू, तिनीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछ र मुक्ति पाउनुहुनेछ र स्वर्गमा जानुहुनेछ।
तर हामी यो भन्न सक्दैनौं कि हामीलाई यति ज्ञानको साथ परमेश्वरको प्रबन्धको ठीक बारे थाहा छ, जुन क्रूसको सन्देशमा पाइन्छ।
उदाहरणको लागि, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ कि किन परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञानको रूख रोप्नुभयो?
मानिस पापमा फस्नुको कारण आदमले असल र खराबको ज्ञानको रूखबाट खाए।
यदि रूख नभएको भए, आदमले पाप नगरे, र उनी अदनको बगैंचामा शान्तपूर्वक बाँच्न सक्थे।
के परमेष्वरले राम्रो र नराम्रो ज्ञानको रूख बनाइसक्नुभएको छैन र? परमेश्वरले किन त्यो रूख रोप्नुभयो जहाँबाट आदमले त्यो खान सक्दछन्?
के परमेश्वर जान्नुहुन्न कि आदमले असल र खराबको ज्ञानको रूखबाट खानेछ? परमेश्वर सर्वशक्तिमान् र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो कुरा पक्कै पनि थाहा थियो।
यद्यपि, परमेश्वरले त्यहाँ ज्ञानको रूख रोप्नुभयो। यसको कारण के हो?
के तपाईं यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ?
के तपाईंले कहिल्यै यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सुन्नुभएको छ?
निस्सन्देह, यो त्यस्तो होइन कि यदि भगवानले असल र खराबको ज्ञानको रूख किन रोप्नुभयो भनेर हामीलाई थाहा छैन भने हामी मुक्ति पाउने छैनौं।
यदि हामी हाम्रा पापहरूको पश्चात्ताप गर्छौं र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्छौं भने हामी मुक्ति पाउन सक्छौं।
तर यदि तपाईं मुक्तिको बाटोमा भेटिएका गहिरा चीजहरू बुझ्नुहुन्छ भने, तपाईं अझ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं भगवानको हृदय बुझ्नुहुनेछ र स्पष्ट रूपमा विजयी मसीही जीवन बिताउनुहुनेछ। तपाईं शैतानको प्रलोभनहरू पार गर्न र ज्योति हो, जो परमेश्वरको छोराको अधिकारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
म तिमीलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि तपाईं सुन्तला खान्नुहुन्छ भने, यसलाई खाएर तपाईं मात्र लाभ उठाउनुहुनेछ।
तर यो उत्तम छ कि यसमा कस्तो खालका पोषणहरू हुन्छन् र ती पौष्टिक तत्वहरूबाट हामी के फाइदाहरू पाउँछौं भन्ने कुरा जान्दछौं।
उदाहरण को लागी, मानौं कि तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि सुन्तलामा भिटामिन सी धेरै हुन्छ र छालाका लागि राम्रो हुन्छ, यसले थकान कम गर्दछ, र रोगहरू प्रतिरोधलाई बढावा दिन्छ।
त्यसो भए तपाईले यसलाई खानु हुनेछ किनकि यो स्वादिलो मात्र हो तर तपाईले यसलाई खाँदा पनि चाहिन्छ।
एक विश्वासीको जीवनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
तपाईंले केवल यसो भन्नु हुँदैन, म विश्वास गर्दछु, तर क्रूसमा परमेष्वरको प्रबन्धलाई राम्ररी बुझ्नुपर्दछ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। त्यसोभए, तपाईं विश्वस्त भई स्वर्गमा जानुहुन्छ र यस पृथ्वीमा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा आशीर्वाद पाउनुहुनेछ।
म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु क्रसको सन्देश तपाईको मुटुमा छाप्नुहोस्, जुन म आज सुरू गर्नेछु।
म प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले क्रूसमा परमेष्वरको उद्धार महसुस गर्नुहुनेछ र अनुग्रह र सामर्थ पाउनुहुनेछ।
प्रिय भाइबहिनीहरू, क्रिस्टलका माध्यमबाट विश्वव्यापी भेलामा भाग लिइरहेका सदस्यहरू, शाखा चर्चहरू, स्थानीय भवनहरू, प्रकाश र नुन मिसनहरू, रेष्टुरेन्ट मिशनका सदस्यहरू, जो इन्टरनेटमा विश्वव्यापी भेला भएका सदस्यहरू, प्रिय दर्शकहरु, र आइतवार स्कूल बच्चाहरु, क्रस को सन्देश मा तपाईं पहिलो भाग मा भगवान को बताउँछ।
यस संसारका धेरै मानिसहरू परमेश्वर छैनन् भनेर जिद्दी गर्दछन्। त्यहाँ अरूहरू छन् जसले मानव कल्पनाको द्वारा बनाईएको देवताहरूको पूजा गर्छन् वा परमेश्वरका प्राणीहरूको छविहरू बनाउँदछन् र देवताहरूको रूपमा पूजा गर्दछन्।
यद्यपि हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौं, उहाँ अवश्य पनि जीवित हुनुहुन्छ, र हामीले मात्र उपासना गर्न सक्ने एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमेश्वर ब्रह्माण्ड, सबै थोकको र मानिसजातिको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ शासक हुनुहुन्छ र सबै कुराको न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर कस्तो किसिमको जीव हुनुहुन्छ?
वास्तवमा भन्ने हो भने, मानिसहरूलाई परमेश्वरको व्याख्या गर्न सजिलो छैन। मानिस मात्र प्राणी हो। परमेश्वर मानिसका सबै सीमाहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ। परमेष्वर असीमित हुनुहुन्छ।
जतिसुकै हामी हाम्रो ज्ञानको साथ मनन गर्छौं, हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वर बारे जान्न सक्दैनौं।
यद्यपि हामी पूर्ण रूपमा ईश्वरको बारेमा जान्न सक्दैनौं, हामीले परमेश्वरको सन्तानको रूपमा आधारभूत कुरा जान्नुपर्दछ। म भगवान को हो चारओटा पक्षहरु को बारेमा कुरा गर्नेछु?
सबैभन्दा पहिला, स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उत्पत्ति १ः १ ले बताउँछ कि शुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
उत्पत्ति को पहिलो अध्यायले बताउँछ कि छ दिनमा, परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई आफ्नो वचनबाट कुनै चीजबाट सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिको छैटौं दिनमा छैटौं दिनमा उनले मानवजातिको पुर्खा आदमलाई बनाए।
त्यस्तै गरी, किनभने परमेश्वर परमेष्वरले बनाउनुभएको हो, त्यसले सहज ही आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको अस्तित्व महसुस गर्दछ।
सभोउपदेशक 11ः११ ले भन्छ, उहाँले सबै चीज यति सुन्दर बनाउनुभयो कि उहाँ आफ्नै समयमा सुन्दर हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्त र अनन्तको ज्ञान सिर्जना गर्नुभयो, तर उहाँले अनन्त र अनन्तको ज्ञान सिर्जना गर्नुभयो, यसबाट अन्त हुन्छ एक मानव पनि बुझ्न सक्दैन। ष्
भनिएको छ, परमेश्वरले मानिसलाई उसको हृदयमा अनन्त कालको ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ।
किनभने तिनीहरूसँग यो छ, यद्यपि विवेकले परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ र यसलाई पत्ता लगाउँदछ, यदि उनीहरूले परमेश्वर बारे सुनेका छैनन् वा जानेका छैनन्।
जसले भन्छन्, ष्म परमेश्वरमा विश्वास गर्दिनँ, यी ती मानिसहरू हुन् जसले भविष्यको जीवनको बारेमा सोच्न डराउँछन्, स्वर्ग र नरक त्यहाँ छ भने के हुन्छ?
तसर्थ, तिनीहरू भलाइ मा बाँच्न को लागी, नरक मा जाने कोशिस गर्दैनन्।
रोमी १ः २० ले भन्छ, किनभने उनका अदृष्य गुणहरू, अर्थात्, उहाँको अनन्त सामर्थ, र ईश्वरीयता, सृष्टि गरेको समयदेखि नै उहाँका कार्यहरू मार्फत देखिन्छन्, ती शून्य पनि छन्।
भनिएझैं हामीले ईश्वरलाई सीधै देख्न सक्दैनौं, तैपनि हामी बुझ्न सक्छौं कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता र एक मात्र सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, किनकि सृष्टिकर्ताले सृष्टि गर्नुभएको ब्रह्माण्डमा सबै थोकमा सृष्टिकर्ता ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो।
म तिमीलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यस संसारमा धेरै व्यक्ति छन्।
त्यहाँ धेरै जातीय र जातीय समूहहरू छन् जसका फरक भाषाहरू, संस्कृतिहरू र छालाको रंगहरू छन्।
तर ती सबैसँग केहि चीजहरू समान छन्। सबै व्यक्ति र जातीय समूहहरूको दुई आँखा छन्। ती सबैका दुई कान छन्, एक नाक र एक मुख।
सबैको स्थान उही हुन्छ। नाक अनुहारको बीचमा छ र आँखा माथिल्लो भागमा छन्।
मुख नाक मुनि छ, र कानहरू अनुहारको दुबै छेउमा छन्।
तर यो होइन कि मानिससँग केवल त्यस्तै संरचना र स्थान हुन्छ। यो जनावरहरूको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। हावाको चरा, समुद्री, कीरा र माछामा। प्रत्येक प्रजातिको विशेषतामा एक सूक्ष्म भिन्नता हुन्छ, तर मूल रूपमा ती सबैको संरचना समान हुन्छ।
थप रूपमा, तिनीहरूसँग पाचन प्रणाली र प्रजनन प्रणालीको समान संरचनाहरू छन्। यस्तो समानताको कारण भनेको केवल एक मात्र सृष्टिकर्ताको डिजाइनद्वारा चीजहरू बनाइएको थियो।
विश्वका मानिसहरु डार्विनवादको शिक्षामा जोड दिन्छन्, र परमेष्वरको सृष्टिलाई इन्कार गर्छन्।
तर यदि मानिसहरु हामी भन्छौ विकास भएको छ भने, हामी संग समान संरचना छैन।
हामी धेरै प्रकारका ढाँचा र संरचनाहरूमा विकसित हुन सक्दछौं।
यसबाहेक, यदि त्यहाँ एक भन्दा बढी सिर्जनाकर्ताहरू थिए भने, पुरुष र पशुहरूको संरचना समान प्रकारले हुने थिएन।
यसको कारण यो छ कि यदि त्यहाँ धेरै रचनाकारहरू थिए भने उनीहरूले आफ्नो प्राणीहरूलाई उनीहरूको प्राथमिकता अनुसार संरचना र कार्यहरूसहित सृष्टि गरेका हुन्थे।
तर यो पनि कि लगभग सबै चीजको एउटा संरचना र प्रकार्य छ, हामी निश्चित रूपमा बुझ्न सक्छौं कि ती डिजाइनहरू र केवल एक सिर्जनाकर्ता, भगवानद्वारा निर्मित थिए।
प्रिय भाइबहिनीहरू, डार्विनवादीहरू भन्छन् कि जीवित जीवहरू निम्न-स्तर जीवहरूबाट उच्च-स्तरका जीवहरूमा विकसित भएका छन्।
तर उत्पत्ति १ः२१ मा यो पनि भनिएको छ कि परमेश्वरले पानीका ठूला प्राणीहरू र सबै जीवित प्राणीहरू, जुन पानीले धेरै भरिन्छ, र प्रत्येक उड्ने प्रजातिका चराहरू पनि बनाउनुभयो। यो राम्रो छ।
यसबाहेक, उत्पत्ति १ः २ ेंले ले भन्छ, यसैले परमेश्वरले पृथ्वीका जंगली जनावरहरू, र जातिहरूका घरेलु पशुहरू, र पृथ्वीमा सबै घस्रने जन्तुहरू सृष्टि गर्नुभयो, र परमेश्वरले यो देख्नुभयो कि यो असल छ।
समय बित्दै जाँदा फार्महरू थोरै परिवर्तन भएका छन्, तर परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनुभएको छ।
कुनै स्तनपायी प्राणी माछाबाट बनेको छैन, न त कुनै स्तनपायी प्राणीबाट चराहरूमा विकसित भएको छ। यो होइन कि वानर मानवमा विकसित भयो। बाँदरलाई वानर र मानवलाई मानव बनाइयो। यस बाहेक, मानिसहरु केवल भगवानको रुपमा सृष्टि गरिएको थियो जसमा आत्मा, आत्मा र शरीर छ।
कुनै बाँदर, यद्यपि मानव जस्तो छ, उसले परमेश्वरको अस्तित्व महसुस गर्न सक्दैन, न त ऊ आफैंमा आत्मा नभएको कारण उसले मानिस जस्तो भगवानको पूजा गर्छ।
यसबाहेक, जब हामी प्रकृतिलाई हेर्दछौं, हामी सृष्टिकर्ता ईश्वरको सृष्टिको धेरै प्रमाणहरू देख्न सक्दछौं। पृथ्वी दिनमा एक पटक घुमाउँछ र वर्षको एक पटक सूर्यको वरिपरि घुम्छ र जून महिनामा एक पटक पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ।
यी क्रान्तिहरू र परिक्रमणहरूको माध्यमबाट, हामीसँग पृथ्वीमा चीजहरू कालक्रम क्रमबद्ध रूपमा छन्।
हामीसँग दिन र रात र चार सत्रहरू छन्। टाइड्स बगैंचाको माथिल्लो भाग र हावाको प्रवाह हो।
र, यी आन्दोलनहरू र स्वर्गीय ब्लकहरूको स्थानहरू उचित रूपमा स्थापित छन् ताकि यो मानिसजातिको लागि फिट र सही छ र जीवित प्राणीहरू बाँच्न सक्दछन्।
यसको अक्षमा सूर्य र पृथ्वी र पृथ्वी र चन्द्रको बीचको दूरी एकदम व्यावहारिक दूरी हो।
यो या त धेरै टाढा हुन सक्छ वा यसको वर्तमान दूरीको धेरै निकट हुन सक्छ।
यस तरिकाले, पृथ्वी विगत धेरै वर्षदेखि कुनै त्रुटि बिना नै घुम्दै र परिक्रमण गर्दै छ, एक उचित दूरी राखेर।
के तपाईंलाई लाग्छ कि यी सबै अनुक्रमहरू बिग बैंगले गर्न सक्छन् जस्तो कि कोही वैज्ञानिकहरू भन्छन्?
किन तपाईं सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्दैन? यदि तपाइँले एउटा घडी खोल्नुभयो भने, धेरै साना अंशहरू यसमा यति राम्रोसँग स ंतम्कलन गरिन्छ कि घडी चल्न सक्छ।
अब मानौं कि कसैले तपाईंलाई यो देखाउँदैछ र तपाईंलाई निम्न बताउँदैछरू ष्कसैले पनि यो घडी बनाएको छैन। ज्वालामुखी विस्फोटले ती अंशहरूलाई बाहिर ल्यायो र तिनीहरू आफैं भेला भए र घडी चल्न थाले। के तपाईं यसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ? जबसम्म तपाईं बेवकूफ हुनुहुन्न, तपाईं यसलाई कहिले विश्वास गर्नुहुन्न।
तर यो संसार र यसबाट बनाइएको सबै कुरा विकासबाट बनाइएको हो भन्न खोज्नु यसमा कम अर्थ लाग्दछ।
एक ब्रह्माण्डको गति, कसरी घडीको भन्दा अतुलनीय सत्य हो, कसरी एक घटनाको परिणाम हुन सक्छ?
कसरी यति विशाल ब्रह्माण्ड एक कठोर रूप मा आफैमा सार्न सक्छ?
यो सम्भव छ किनभने परमेश्वरले ब्रह्माण्ड र यसमा सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो र यो नै त्यसले ड्राइभ गर्दछ।
सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यी सबै चीजहरू उहाँको शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो र शासन गर्नुहुन्छ। किनभने हामीसंग त्यस्तो प्रमाण छ, कोही पनि अन्तिम न्यायको दिनमा बहाना बनाउन सक्षम हुनेछैनन्।
कसैले भन्न सक्दैन, मैले सोचे कि ईश्वर अब छैन।
प्रिय भाइहरू र बहिनीहरू, ख्रीष्टमा किन यस्तो विश्वास हुँदैन कि कसले त्यस्तो सृष्टिको स्पष्ट प्रमाण देख्छ?
किनभने तिनीहरू केवल आफ्ना आँखाले देख्ने कुरामा विश्वास गर्दछन्, उनीहरूको हातले छोए, र उनीहरूको ज्ञान र विचारहरूले बुझे।
तिनीहरू जीवित अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्दैनन्। तिनीहरूले बाइबलमा रेकर्ड गरिएका चमत्कार र आश्चर्यकर्महरूलाई स्वीकार गर्दैनन्।
तर बाइबलका सबै शब्दहरू सत्य छन्। यो सत्य हो कि परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, र चिह्नहरू, चमत्कारहरू र शक्तिशाली कार्यहरू वास्तवमै गरिएका थिए।
यी चीजहरू केवल सृष्टिकर्ता भगवानले गर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नारूरू ेंले 48 ले भन्छ, येशूले उसलाई भन्नुजभयो, जबसम्म तपाइँ चमत्कार र अचम्मका कामहरू देख्नुीहुन्न तबसम्म तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्न।
मानव विचार र डिजाइन भ इतवामद्ग हुन्छन्, तिनीहरूले संकेतहरु र चमत्कारहरु देख्दछन् जुन मानव सीमा भन्दा बाहिर छ।
जब उनीहरूले परमेश्वरका कामहरूबाट कुनै कुरा अनुभव गरे जुन उनीहरूले सोचे कि एकदम असम्भव थियो, तब मात्र तिनीहरूले स्वीकार गर्न सक्दछन् कि केवल परमेश्वरको वचन सत्य छ, यद्यपि यो उनीहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन।
तसर्थ, बाइबलमा, परमेश्वरले हामीलाई आफ्ना धेरै शक्ति र आश्चर्यकर्महरू मार्फत देखाउनुभयो कि उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ।
मिश्रमा फिरऊन र तिनका अधिकारीहरूका लागि मोशाले दस विपत्तिहरू मार्फत जीवित परमेश्वरलाई प्रदर्शन गरे।
एलियाले स्वर्गबाट आगो पठाए र साढे तीन वर्षको खडेरी पछि स्वर्गबाट वर्षा भयो।
येशूले आफू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण र चमत्कारद्वारा प्रमाणित गर्नुभयो।
प्रेरित पावल बिरामी र कमजोरीहरू निको पारे, दुष्ट आत्माहरूलाई खेद्न र येशू ख्रीष्टको नाममा मरेकाहरूलाई बिउँताए। जब मानिसहरूले यी चीजहरू देख्दछन् जुन केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट गर्न सकिन्छ, अविश्वासीहरूले पनि सृष्टिकर्ता भगवानलाई ग्रहण गर्छन्। उनले सुसमाचार र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे।
यस युगमा पनि हामी आज बाँचिरहेका छौं, यद्यपि यस समयमा पनि परमेश्वरका यी कामहरू आवश्यक छन्।
अविश्वासीहरूलाई जीवित सृष्टिकर्तालाई विश्वास गर्ने ईश्वरीय चिह्नहरू र आश्चर्यकर्महरू प्रकट गर्ने शक्ति सबैभन्दा विश्वासयोग्य प्रमाण हो।
यस चर्चको स्थापनादेखि नै अनगिन्ती संकेतहरू र चमत्कारहरू भइरहेका छन् र समय बित्दै जाँदा अझ शक्तिशाली कार्यहरू भइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, क्यान्सर र एड्सजस्ता असाध्य रोगहरू र कमजोरीहरू र शारीरिक अशक्तताहरू परमेश्वरको शक्तिले निको पार्दैछन्।
यी उपचार कार्यहरू फिलिपिन्स, होन्डुरस, भारत, रसिया, जर्मनी र पेरू लगायतका थुप्रै देशहरूमा चिकित्सकहरूले प्रमाणिकरण गरेका छन्। यी प्रमाणहरूको माध्यमबाट, संसारभरका धेरै व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार्न र उहाँको हृदयमा विश्वास गर्न सक्षम भए।
यहाँसम्म कि धेरै ज्ञान भएका र मूर्तिहरूको पूजा गर्नेहरूले पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई स्वीकार्न र उहाँमा विश्वास गर्न थाले, जीवित परमेश्वरका कार्यहरू देखेर।
त्यहाँ त्यस्ता धेरै केसहरू छन्, तर मलाई तपाईलाई परिचय दिन म तिनीहरूलाई एक वा दुई मध्ये एक बनाउन चाहन्छु।
मन्मीन ज -्ग-ए ज्ञंस्ग कालिसियाको वरिष्ठ डिकनास युन देउक किमले उनको पूरै शरीरलाई उमालेको पानीले जलाइदिए।
उसको अनुहार र हातहरू सहित बाहेक केही भाग बाहेक उसको शरीरलाई गम्भीर रूपमा जलाइएको थियो।
तपाई पर्दामा देख्न सक्नुहुन्छ, घाँटी यति डरलाग्दो थियो कि ऊ अस्पतालमा गएको भए पनि उसको मृत्यु हुने थियो। तर जब म येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछु, तातो उसको शरीरबाट निस्की आउँदछ र पीडा थाल्छ।
त्यसो भए, तिनीहरूको नसा, नलिका र छाला कोषहरू, जुन उमालेको पानीले जलाइन्थ्यो, फेरि बन्न थाल्छ।
कोठामा जलाइएको कोशहरू पहिले नै मरेका थिए, त्यसैले तिनीहरू मानव विधिद्वारा पुनर्जीवित हुन सकेन।
तर सृष्टिकर्ता परमेष्वर जसले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, आगोले जलेका भागहरूलाई पुनरू निर्माण गर्नुभयो।
ऊ कहिले पनि कुनै औषधि सेवन गरेन वा अस्पतालमा गएको थिएन, तर उसको शरीर पूरै निको पारिएको थियो बच्चाको जस्तो।
धेरै जसो केसहरुमा अस्पतालहरुमा उपचार पछि पनि मानिसहरु कुरूप नै रहन्छन्।
तर मेरो प्रार्थना प्राप्त भए पछि, उनको कुनै चिन्ता थिएन, यद्यपि ऊ रिस उठेको थियो।
उनी अहिले खुशी र स्वस्थ जीवन बिताइरहेकी छिन्, परमेश्वरको राज्यको सेवामा।
मन्मीनका अरू धेरै सदस्यहरू छन् जो गम्भिर रूपमा जलाइए र विश्वासका साथ प्रार्थना गरेर निको पारिए। ती अवस्थाहरूमा, तिनीहरू सबै कुनै पनि प्रकारको कुनै पहिचान बिना नै धेरै छिटो निको भयो, यद्यपि उनीहरूले कुनै औषधि लागू गरेनन्।
साथै, जुलाई २००२ मा, जब हामी होण्डुरसमा क्रुसेड गयौं जहाँ हजारौं व्यक्तिहरूले भाग लिएका थिए, त्यहाँ परमेश्वरका अचम्मका कामहरू थिए। मलाई तपाईलाई ती मध्ये एक केस मात्र बताउँछु।
मारिया डोमिनम्ग्युज, जो १२ वर्षकी थिइन जब उनी दुई वर्षकी थिइन, उनको दाहिने आँखा हरायो र उनको कॉर्निया प्रतिस्थापित भयो।
तर शल्यक्रिया राम्रोसँग सकिएन, र उनले १० बर्षसम्म कुनै प्रकाश देखिन। तर जब उनी होण्डुरस धर्मयुद्धमा सहभागी भए र प्रार्थना गरे, उनी हेरी।
मानव आँखा बनाउनुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वरको शक्तिले गर्दा उहाँ मरेका नसहरू पुनर्जीवित हुनुभयो। यी कुराहरू बाहेक, हाम्रो चर्चमा सृष्टिकर्ता परमेश्व रले धेरै कामहरू गर्नुभयो। तपाईं हाम्रो चर्च वेबसाइट वा मानमिन टिभी र अन्य सम्बद्ध संगठनहरूको होमपेजमा यो काम आफ्नै लागि देख्न सक्नुहुन्छ।
हामी यी प्रमाणहरूद्वारा देख्न सक्छौं, परमेश्वर वास्तवमै जीवित हुनुहुन्छ र स्वर्ग र पृथ्वी र यसमा भएका सबै थोक सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ।
प्रिय भाइबहिनीहरू, ख्रीष्टमा भजन ब्ीतपेज 53ः १ ले भन्छ, मूर्खले हृदयमा भन्यो कि त्यहाँ परमेश्वर छैन। तिनीहरू खराब हुँदैछन्, तिनीहरूले घिनलाग्दा कामहरू गरेका छन्, कुनै राम्रो छैन।
मूर्ख र दुष्टले परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने कोशिश गर्दछ किनकि उनीहरूले उहाँलाई देख्न सक्दैनन्।
तर आज सन्देशमा भनेझैं परमेश्वर साँच्चै जीवित हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ताको प्रमाण प्रकृति र यसको शक्तिमा स्पष्ट देखिन्छ।
उपदेशक १२ः १ ेंले ले भन्छ, अन्तिम कुरा सुन्नु भनेको परमेश्वरको डर हो र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुहोस्, किनकि यो मानवको सम्पूर्ण कर्तव्य हो।
म आशा गर्दछु तपाईं निश्चित रूपमा परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुनेछ, उहाँसँग डराउनुहुनेछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्नुहुनेछ।
जब तपाईं त्यसरी नै मानिसको कर्तव्य गर्नुहुन्छ, तब सृष्टिकर्ता भगवानले तपाईंलाई स्वर्गको राज्यमा डो समंक्याउनुहुनेछ र तपाईंको प्रार्थना र तपाईंको हृदयका इच्छाहरू हटाउनुहुनेछ।
उसले समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ जुन मान्छेले आफ्नै शक्तिले समाधान गर्न सक्दैन।
जब तपाईं तल झर्नुहुन्छ र यस तरिकामा आशिष्हरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं अविश्वासीहरूलाई अझ जोडतोडका साथ प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यस प्रकारले परमेश्वरलाई भेटेको छु र अनुभव गरेको छु।
म तपाईंलाई परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले आफ्नो दैनिक जीवनमा परमेश्वरकै महिमा अनुभव गर्नु हुनेछ।